အန်းဒရွိုက်အော်တို APK ကိုဒေါင်းလုပ် | မိုဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
အန်းဒရွိုက်အော်တို APK ဖိုင်၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်
အန်းဒရွိုက်အော်တို APK ကိုဒေါင်းလုပ်:အန်းဒရွိုက်အော်တိုသင့်ရဲ့ပညာရှိမောင်းနှင်မှုအဖော်ဖြစ်ပါသည်. တစ်ရိုးရှင်းသော interface ကိုနှင့်အတူ, ကြီးမားခလုတ်, နှင့်မြင့်မားထိရောက်သောအသံဖြင့် features တွေ, အန်းဒရွိုက်အော်တိုသင်သွားလာရင်းပေါ်မှာဆိုရင်သည့်အခါလွယ်ကူသင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်း app များကိုသုံးစွဲဖို့လုပ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသည်.
• ရန်လမ်းကြောင်းကို သင့်ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ အားလပ်ရက်အစက်အပြောက် အသုံးချဖို့ Real-time ဂျီပီအက်စ်အညွှန်းတွေနဲ့ဂူဂဲလ်မြေပုံနဲ့ site ကိုဧည့်သည် သတိပေးချက်
•ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု Make အသုံးချဖို့ Google ကလက်ထောက်နှင့် ပြန်ကြားချက် အတူဝင်ခေါ်ဆိုမှု တစ်ဦးသာ ရေပိုက်ခေါင်း.
• Spotify နှင့်အတူသင်အကြိုက်ဆုံးမီဒီယာ apps များ Watch, ပန်ဒိုရာ, iHeartRadio, Google ဂီတ Play, အမေဇုံဂီတ, NPR တစ်, ကွားနိုငျ, MLB.com နှင့် Deezer. အတော်များများကအပိုဆောင်းဂီတ, ရေဒီယို, သတင်းအချက်အလက်, အားကစားလှုပ်ရှားမှုသတင်းအချက်အလက်, အော်ဒီယိုစာအုပ်များနှင့် Podcast တခုကို apps များကိုလည်းထောက်ခံနေကြတယ်
• SMS ကို အသုံးပြု. သင်၏ Google လက်ထောက်နှင့်အတူမက်ဆေ့ခ်ျပို့ပါ, လက်ခံ, Hangouts ကို, WhatsApp ကို, Skype ကို, ကွေးနနျးစာ, WeChat, အဘယ်သူသည်, Google က Allo နှင့်အခြားသောစာတိုပေးပို့ရေး apps.For အပြည့်အဝ စာရင်း ၏ သင့်လျော်သော apps များ, http သွားပါ://g.co/androidauto
အသုံးပြုမှုအောင် အန်းဒရွိုက်အော်တို, သငျသညျလိမ့်မယ် အလိုရှိ တစ်ဦး ဆဲလ်ဖုန်း လုပ်ငန်းလည်ပတ် အန်းဒရွိုက် 5.သုည သို့မဟုတ် ပိုကြီးတဲ့ (Lollipop, Marshmallow, Nougat, သို့မဟုတ် Oreo) ကာ ရွှင်ပျသော သတင်းအချက်အလက် ကွန်နက်ရှင်.
ကျော်လွန် 400 မော်တော်ယာဉ် ဖက်ရှင်တွေ ယခု ကူညီပါ အန်းဒရွိုက်အော်တို! ထွက်ရှာဖွေ ထွက် သင့်ရဲ့အမှု၌ မော်တော်ယာဉ် ပြသ ဖြစ် သင့်လျော်သော နှင့် ဘယ်လောက်တဦးတည်းလုပ်နိုင် ခွင့်ပြု က, ဆနျးစစျ သင့်ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း'' s ကို လကျဆှဲစာအုပျ သို့မဟုတ်သင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် မော်တော်ယာဉ်'' s ကို ထုတ်လုပ်သူ.ပြီးတာနဲ့ activated, သင့်ရဲ့မော်တော်ယာဉ်မှသင့်ရဲ့ဖုန်းကို attach တစ်ဦးက high-quality ကို USB cable ကိုအသုံးပြုပါ, ထို့နောက်အန်းဒရွိုက်အော်တိုစတင်ရန် start!
ဆုံးမသွန်သင်လိမ့်မည် အပို အန်းဒရွိုက်အော်တိုအကြောင်းကိုနှင့် သင့်လျော်သော မော်တော်ကား http မှာ://android.com/auto
ဘို့ ကူညီပါ: http://support.google.com/androidauto
ရယူ ထောက်ပံ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနေဖြင့် အုပ်စုတစ်စု: https://productforums.google.com/forum/#!ဖိုရမ် / android ကားတစ်စီး
အန်းဒရွိုက်အော်တို - Maps ကို, မီဒီယာ, messaging & အသံ Google က LLC အားဖြင့်
Muzhiwan Apk Android အတွက် Download
အခမဲ့ပန်ဒိုရာတစ်ခုမှာသိကောင်းစရာများ APK ကိုဒေါင်းလုပ်
ကြေးနန်း APK ကိုဒေါင်းလုပ်
Gboard – ကို Google Keyboard ကို APK ကိုဒေါင်းလုပ်
Firefox ကိုအာရုံစိုက် APK ကိုဒေါင်းလုပ်
စင်ကြယ်သောမဟာ Lite ကို – အနိမျ့-End ဖုန်း APK ကိုဒေါင်းလုပ်များအတွက်
FX ဖိုင်မှတ်တမ်း Explorer ကို APK ကိုဒေါင်းလုပ်
ဒီမှာက Android အော်တို APK ဖိုင်၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်
ဗိုလ်လုပွဲ နောက်ဆုံးပေါ်: အောက်တိုဘာလ 01, 2018
ဖိုင်မှတ်တမ်း အတိုင်းအတာ: 16 mb
ဒေါင်းလုပ်: အန်းဒရွိုက်အော်တို APK ကို
LinkedIn တို့အပေါ်မျှဝေဖို့ကိုနှိပ်ပါ (ဝင်းဒိုးအသစ်ဖွင့်လှစ်)
WhatsApp ကိုအပေါ်ကိုမျှဝေဖို့ကိုနှိပ်ပါ (ဝင်းဒိုးအသစ်ဖွင့်လှစ်)
Tumblr သည်ပေါ်ဝေမျှဖို့ကိုနှိပ်ပါ (ဝင်းဒိုးအသစ်ဖွင့်လှစ်)
MoviePass APK ကိုဒေါင်းလုပ် | မိုဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
Royale APK ကိုဒေါင်းလုပ်ထိပ်တိုက်တွေ့ | မိုဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
YouCam ပြီးပြည့်စုံသော – selfie ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာ APK ကိုဒေါင်းလုပ် – လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
Motu Patlu စက်ဘီးစွန့်စားမှု APK ကိုဒေါင်းလုပ် – လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
SuperVPN အခမဲ့ VPN ကိုလိုင်း APK ကိုဒေါင်းလုပ် – လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
Android အတွက် ViaGate ခရီးသွားသိကောင်းစရာများ – APK ကိုဒေါင်းလုပ် – လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
combo PlayerAPK ဒေါင်းလုပ် – Android အတွက်အခမဲ့ Video Play စ | လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
Google ကသတင်းများ APK ကိုဒေါင်းလုပ် | မိုဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
MP3, Video Converter APK ကိုဒေါင်းလုပ် | အကောင်းဆုံး…
Netflix (အန်းဒရွိုက်တီဗီ) APK ကိုဒေါင်းလုပ် | အကောင်းဆုံး…
VPNhub APK ကိုဒေါင်းလုပ် | သည်အကောင်းဆုံး Apps ကပ…
Instagram ကို APK ကိုဒေါင်းလုပ် | သည်အကောင်းဆုံး Apps ကပ…
hay နေ့ APK ကိုဒေါင်းလုပ် | အကောင်းဆုံး Apps ကပ…
AIR တင်ပေးသူ – လျင်မြန်စွာ & စမတ်, အခမဲ့…
Angry Birds ဂိမ်း v1.6.3 – APK ကို Download လုပ်ပါ
Reddit: အဆိုပါတရားဝင် App ကို .apk ဒေါင်းလုပ် – …
Jetpack Joyride ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး APK ကို Download လုပ်ပါ [Unlimited ဒင်္ဂါးပြား] …
MSQRD 1.0.3 APK ကို | Download Best Apps…
App Cloner APK Download | အကောင်းဆုံး Apps ကပ…
TextNow APK ကိုအခမဲ့ဒေါင်းလုပ် | အကောင်းဆုံး Apps ကပ…
TextNow APK ဖိုင်၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ် TextNow APK ကို…
KeePass ကို 2.42.1 & 1.37 ဘာသာပေါင်းစုံ
တပ်ဆင်စရာမလိုဘဲ Password ကိုမန်နေဂျာ. Download အိတ်ဆောင် KeePass Multiversion ဘာသာစကားမျိုးစုံအွန်လိုင်း…
လေယာဉ်ရှေ့ပြေး Simulator 3D အခမဲ့ APK ကိုဒေါင်းလုပ်…
လေယာဉ်ရှေ့ပြေး Simulator 3D အခမဲ့၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်…
Reaper 5.976 32-64 နည်းနည်း En
အသံထုတ်လုပ်မှုများအတွက်လျင်မြန်သောပတ်ဝန်းကျင်, အင်ဂျင်နီယာ, ထွက်နှင့်အတူမှတ်တမ်းတင်ခြင်း…
Pokemon Pass ကို APK ကို Downloads | အကောင်းဆုံး Apps ကပ…
Pokemon Pass ကို APK ဖိုင် Pokemon ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်…
Google ကြံ့ခိုင်မှု APK ကိုဒေါင်းလုပ် | အကောင်းဆုံး Apps ကပ…
Google ကြံ့ခိုင်မှု APK ဖိုင်ကို Google ၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်း Download…
HyperSnap 8.16.13 32-64 နည်းနည်း
မျက်နှာပြင်ကို Windows Screen ကနေဖမ်းယူ, တပ်ဆင်စရာမလိုဘဲနှင့်စာသားဖမ်းမိ။…
သတ္တုပက်ကျိ Infinity APK ကိုဒေါင်းလုပ် | အကောင်းဆုံး…
သတ္တုပက်ကျိ Infinity APK ဖိုင်၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်…
Viu APK ကိုဒေါင်းလုပ် | သည်အကောင်းဆုံး Apps ကပ…
Viu APK ဖိုင် Viu APK ကို၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်…
Badland ရန်ပွဲ APK ကိုအခမဲ့ဒေါင်းလုပ် | အကောင်းဆုံး…
Badland ရန်ပွဲ APK ဖိုင် Badland ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်…
TorrentPRO 3.5.5.45225 ဘာသာပေါင်းစုံ
အလွန်သေးငယ်သောက BitTorrent client ကိုတပ်ဆင်စရာမလိုဘဲ. အွန်လိုင်းအိတ်ဆောင်လို့ Torrent Download (0.9 …
Google Chrome က 74.0.3729.131 32-64 နည်းနည်းဘာသာစကားမျိုးစုံ
ကို set up ထွက်နှင့်အတူ Google ကအင်တာနက် browser. အိတ်ဆောင် Chrome ကို Download လုပ်ပါ…
Skype ကို 8.44.0.40 & 7.41.0.101 & Clownfish 4,56…
ထွက်နှင့်အတူအခမဲ့အင်တာနက်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုဖွင့်လှစ်. အိတ်ဆောင် Skype ကို Download လုပ်ပါ…